ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 1:56 PM
စစ်﻿မှန်﻿တဲ့ ချစ်﻿ခြင်းတရား တည်﻿ရှိ﻿နေတာ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 1:26 PM
John Keats ၏ 'ဂရိအရိုးအိုးတစ်ခုအတွက် တမ်းချင်း' (Ode onaGrecian urn) ကဗျာ၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ်ထဲက 'Beauty is truth. Truth is beauty.' ဟူသော စာကြောင်းကလေးကိုလည်း သွားပြီး သတိရမိလိုက်ပါသည်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:14 PM
မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မည့် ၁၃၇၅ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသဘင် သင်္ကြန် ပွဲတော်ကြီးတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းဝေးစွာဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရေစင် ဖြန်းပက်ကာ မြန်မာနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုနိုင်ကြပါစေဗျာ.....
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:20 PM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:12 PM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:11 PM
ဟိုအရင်က မိုးရွာထဲ ကလေးပီပီ မြူးတူး ဆော့ကစားခဲ့တဲ့အချိန်....
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:38 AM
ကွန်ပျူတာမှာ viber ကို ဘယ်လိုသွင်းရသလဲ၊ နောက်ပြီး ဘယ်လို အသုံးပြုရသလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:28 PM
သင်္ကြန် အထူးစားဖွယ်ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်ထမင်းရဲ့ မူလကတော့ မွန်ပြည်နယ်ပါပဲ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:27 PM
သင့်ချစ်သူကောင်မလေး တစ်ယောက် အံ့အားသင့်သွားအောင် လုပ်လိုပါသလား။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:26 PM
ကိုယ့်အချစ်ရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ အထောက်အကူပြုမယ့် အချက်(၆) ချက်
ဘယ်သူမဆို ရည်းစားထားပြီဆိုတာနဲ့ အချစ်ရေးမှာ သာသာယာယာရှိချင်ကြတာချည်းပါပဲ။
သင်တို့ရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်း အဆုံးသတ်တော့မယ့် သင်္ကေတ(၅)မျိုး
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:25 PM
ချစ်ခြင်းတစ်ခု ရေရှည်တည်မြဲဖို့ဆိုတာ အမျိုးသားတွေအဖို့တော့ အတော်လေး မလွယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ပါပဲ။
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သိမှတ်စရာများ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:22 PM
အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ အနေအထိုင်တွေ ဆင်ခြင်ရ၊ အသွားအလာ၊ အသုံးစရိတ်တွေ လျှော့ချပစ်ရ၊ ရှေ့ရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် အလုပ်တွေလုပ်ရ စသဖြင့် စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ ကာလတွေ ရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:21 PM
ခုရက်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေတယ်လို့ ခံစားနေရပြီလား။
အမျိုးသားတွေ နားမလည်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:19 PM
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးတွေ ကိုယ့်ကိုနားလည်မပေးနိုင်တဲ့ အချက်ဆိုတာ စုံတွဲတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကိုယ့်ရည်းစားထက်တောင် ပိုခင်တွယ်နေပြီလား
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:18 PM
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ဖုန်းကိုပိုခင်တွယ်တတ်ကြတယ်တဲ့။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:15 PM
ကိုယ့်နေထိုင်မှုပုံစံ မမှန်လို့၊ ဒါမှမဟုတ် အကျင့်စရိုက်တစ်ချို့ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လိုနေလို့ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀တွေဟာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်သူတွေးမိမှာလဲ။
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ ရည်းစားမထားပဲ တစ်ယောက်တည်းနေသင့်သလဲ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:11 PM
ကိုယ်က မချစ်တတ်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရည်းစားဆို တုန်နေအောင်ချစ်ပါရက်နဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုပါစို့။
တွဲလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကို မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း (၇ ) ခု
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:09 PM
ရည်းစားသက်တမ်း ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းစုံတွဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရိုးရိုးအသိမိတ်ဆွေအတွဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒင်နာပါတီမှာ တွေ့လိုက်လို့ စကားမရှိ စကားရှာပြီး ဟိုမေးဒီမေးလုပ်တဲ့အခါ မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်မေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။
မိဘတွေက ကျပ်လွန်း၊ ချုပ်လွန်းတာခံနေရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
အမြဲ စိတ်ပျက်နေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မဘ၀ကြီး အကြောင်းကနေ စပြောပါရစေ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:05 PM
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြတ်သွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းက ကိုယ့်ဆီပြန်လာဖို့ ကြိုးစားနေသလားဆိုတာ သိစေနိုင်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။
ချုံ့တောင်မချုံ့ထားတဲ့ HDဆင့် ရုပ်ရှင်၄၄ကားကို တစ်စက္ကန့်ထဲနဲ့ ဒေါင်းနိုင်မယ့် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး အင်တာနက်လိုင်းကို ဗြိတိန်မှာ အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦးသား ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ပိုမိုသေချာသွားစေတဲ့ အချက်များ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:00 PM
ချစ်သူတွေတိုင်း ပေါင်းချင်မှ ပေါင်းကြရတာပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲသွားရတာမျိုးတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးကြား ဘာပြဿနာမှလည်း ထွေထွေထူးထူး မရှိဘူး။
Xbox Live အကောင့်ကို ဟက်နိုင်ခဲ့တဲ့ San Diego မြို့သား ၅နှစ်သားလေး
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:56 PM
Microsoftက ဉာဏ်အထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို San Diego မြို့က ၅နှစ်သားကောင်လေးဟာ တစ်ပတ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ၅နှစ်သားကောင်းလေး ရှာတွေ့ခဲ့တာကတော့ Xboxထဲမှာပါတဲ့ backdoor (လျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်း) တစ်ခုကိုပါ။
USB Stick နေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်လာမယ့် “ဒေတာကပ်ခွာ”
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:54 PM
မကြာခင် ဒေတာကပ်ခွာကို သုံးပြီး ကွန်ပျူတာတွေကနေ ဒေတာကူးနိုင် ပို့နိုင်တော့မှာပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:36 PM
ဤလအတွင်း၌ သင်သည် အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့လာရလိမ့်မည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသော အိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာတတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:10 AM
ပန်းပွင့်ရှိမှ ၊ ရနံ့ ရတာ
မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဖူးသည့်ဝတ်ငုံ
ထုံသည့်တစ်ပွင့် ၊ နမ်းခွင့်တစ်ရှိုက်
ရသည့်ခိုက်မှ ၊ ထာဝရတည်
ကာလရှည်လျား ၊ နှလုံးသားမှာ
စွဲမြဲစွာဖြစ် ၊ထုံနံ့ ယစ်ဝေ
ပျံ့ ဆွတ်စေ၏ ၊ ချစ်သူသိလေ …..။
၂၀၁၄ခု၊ မတ်လအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 6:24 PM
ဤလအတွင်း စိန်ထည်ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန် အကြံအစည်ကောင်းများ အဆက် အဆက်သွက်ကောင်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤကာလအတွင်း ပစ္စည်များကို ထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းအသစ် ကြီးကြီးမားမား စရန် မကောင်းသေးပါ။ ဤကာလအတွင်း ထီမထိုးသင်ပါ။ ထီပေါက်လျှင် မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညံ့သွားတတ်သည်။
** လျှောက်လှမ်းခြင်း **
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:26 AM
ခွက်ထဲက အရည်တွေ ကုန်မသွားခင်ပေါ့
တံတားပေါ်က ခြေသံတွေ ငြိမ်မသွားခင်ပေါ့
ကျွန်တော် ကဗျာတွေ ရေးနေလေရဲ့.....
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:25 AM
ကဗျာတွေ ကခုန်တဲ့ ညမှာ
ပန်းသီးတစ်လုံးက သမိုင်းကို စတင်ခဲ့ပါတယ်.....
ထာဝရ မန္တလေး Lyrice & Song
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:24 AM
စကားလုံး + ဂီတ - ရွှေဂျော်ဂျော်
Intro : V1 ထာဝရ နှလုံးသားလေးထဲ သိမ်းဆည်းလို့ထား ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို အချိန်တွေ ဟောင်းသွားလည်းဘဲ ခုထိမေမ့သေးဘူး
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:15 AM
မိမိရဲ့ တစ်ဘဝတာကို မလဲချင်စမ်းပါနဲ့
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 9:09 AM
** နေရာ **
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:40 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မိန်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:35 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ကုံရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:33 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မကာရရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:32 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ဓနုရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:31 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်တူရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:30 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ကန်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:29 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်သိဟ်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:27 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ကရကဋ်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မေထုန်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:26 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ပြိဿရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:24 AM
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မိဿရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:23 AM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:58 PM
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားစောင်းတန်းတွင် ဗေဒင်ဟောသော ဗေဒင်ဆရာ စောရန်နိုင်ဆိုသူ ရောက်ရှိလာလေ၏ ။ထိုစောရန်နိုင်မှာ ယခင်က ဆည်မြောင်းတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်၏။ နောင်တွင် ကျွန်ုပ်ထံ၌ လောကီပည်များဆည်းပူးကာဗေဒင်လက္ခဟောပြောခြင်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့လေ၏ ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် မင်္ဂလာအခါရက်များ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:53 PM
ဇန်န၀ါရီလ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂၁
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄၊ ၁၅၊ ၂၀
မတ်လ ၃၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂၃
ဧပြီလ ၄၊ ၁၅၊ ၂၀၊ ၃၀
တယ်လီနောက ၀န်ဆောင်မှု ပေးမည့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်တွင် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပါ ထည့်သွင်း ပေးထားမည်
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 7:06 AM
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ပြည်တွင်းတွင် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိထားသော နော်ဝေနိုင်ငံ အခြေစိုက် တယ်လီနော ကုမ္ပဏီက ၀န်ဆောင်မှုပေးမည့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်တွင် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပါ တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်ဟု တယ်လီနော မြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် မစ္စတာ Petter Furberge က ဘားကမ့်ရန်ကုန်ပွဲတွင် မဇ္ဈိမ၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားသည်။
ရတနာပုံတယ်လီပို့က ဂျီအက်စ်အမ်ဆင်းကတ်များအား မိနစ် ၂၀၀ အခမဲ့ခေါ်ဆိုခွင့်နှင့် ရောင်းမည်
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 7:05 AM
”ရတနာပုံတယ်လီပို့အများ ပိုင်ကုမ္ပဏီမှ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို ခွင့်မိနစ် ၂၀၀၊ sms အစောင် ၅၀အခမဲ့ပို့ခွင့်များပါသော ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်များ ကို သြဂုတ်လအ တွင်း ရောင်း ချ နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 7:02 AM
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့် Sim Card က lock ကျသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းလိုင်းပျောက်ပြီး unlock ပြန်လုပ်ဖို့ ဖုန်းက PUK Code တောင်းပါလိမ့်မယ် PUK ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာနဲ့တင် MPT ရုံးဆီရောက်ရောက်သွားရတယ် တကယ်တော့ ဖုန်းဝယ်ကတည်းက PUK code ကပါပြီးသားပါ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:35 PM
ငွေကြေးလား ပစ္စည်းဥစ္စာလား ဂုဏ်ပကာသနလား ဣနြေ္ဒသိက္ခာလား။
အားလုံးကအရေးကြီးပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:27 PM
ရင်ထဲမှာ သိုဝှက် သိမ်းထားမယ်...
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:25 PM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:23 PM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:14 PM
Samsung Galaxy S3 screenshot ရိုက်နည်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 11:05 PM
မေးထားတဲ့သူကတော့ ကြာပါပြီ။ ချက်ချင်း ပြန်မဖြေနိုင်လို့ နားလည်ပေးပါ။
Samsung Galaxy S3 screenshot ရိုက်နည်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် လူသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းများကိုသာ ရှင်းပြ ပေးသွားပါမယ်။
၂၀၁၄-ခုနှစ် - အားလုံးအတွက် ဂဏန်းဗေဒင် ကံကြမ္မာဟောကိန်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:36 PM
၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက်များတွင် မွေးဖွားသော (၁) ဂဏန်းသမားများ
ဘာရောဂါမှန်းမသိတဲ့ ကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးကို သတိထား။ အမှုပြဿနာတွေကို သတိထား။ ဓားခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုမိတတ်တာတွေကို သတိထား။ ရာထူးတိုးသလို၊ ထီပေါက်၊ မဲပေါက်၊ ဆုရသလို ကံထူးတာမျိုး (သို့မဟုတ်) အနုပညာကဲ့သို့ အလုပ်တွေမှာ တစ်ဟုန်ထိုး နာမည်ကြီးသွားတာတွေတော့ ကြုံရလိမ့်မယ်။
(၇)-ရက်သားသမီးများအားလုံး တစ်နှစ်တာ ကံကောင်းစေသော ယတြာများ..
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 10:35 PM
ကျွန်ုပ်၏ အသက်(၂၃)နှစ် ခန့်တွင် ဆရာသခင် အဘမင်းသိင်္ခရှိရာ မှောဘီမြို့ မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာခြံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုမရမ်းတလင်းခြံတွင် အသက် (၂၃)နှစ်မှ အစပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ အသက် (၂၈)တိုင်အောင် ခြံတွင် သန္ဓေတပည့် အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ရင်း ဗေဒင်ပညာ အပါအ၀င် လောကီပညာ အဖုံဖုံတို့ကို သင်ကြား လေ့လာ သင်ယူခဲ့ပြီးနောက် အဘမင်းသိင်္ခထံတွင် ခွင့်ပန်ကာ အပြင်လောကသို့ ထွက်၍ ကိုယ်ပိုင် ဗေဒင်ဟောခန်း ဖွင့်လှစ်ပြီး အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း ပြုခဲ့ရ၏။
၂၀၁၄-ခု ၊ဇန်န၀ါရီအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:33 PM
ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ ကြွလာတတ်သည်။ မထင်မှတ်သော ခရီးများ မရည်ရွက်သော ခရီးများသွားရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားရတတ်သည်။ လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။
သီတာ အများက သတ်﻿မှတ်﻿တဲ့ နာမ်﻿စားတစ်﻿ခုရဲ့ ﻿နော...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မိန်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ကုံရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မကာရရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ဓနုရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်တူရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ်...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ကန်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်သိဟ်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ကရကဋ်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မေထုန်ရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်ပြိဿရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတ...
၂၀၁၄ခုနှစ် အတွက်မိဿရာသီဖွားများ၏ တစ်နှစ်စာပောာစာတမ...
တယ်လီနောက ၀န်ဆောင်မှု ပေးမည့် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်တွင...
ရတနာပုံတယ်လီပို့က ဂျီအက်စ်အမ်ဆင်းကတ်များအား မိနစ် ...
အိမ်ရှေ့က သစ်ပင်ပေါ်က သစ်ရွက်ခြောက်တွေ တဖြုတ်ဖြု...
(၇)-ရက်သားသမီးများအားလုံး တစ်နှစ်တာ ကံကောင်းစေသော ...